Abakhiqizi nabahlinzeki be-Cable 600A | China 600A Ikhebula Izesekeli Factory
I-600A 15kV Integral Deadbreak Bushing
I-Anhuang ekhethekile ku-Integral Deadbreak Bushing, sinikezela ngekhwalithi ephezulu ye-Integral Deadbreak Bushing. Okujwayelekile: I-600A Integral Dead break noma i-Vacuum switching Bushing yenzelwe iKhabinethi Yegatsha lekhebula eneswishi yeSf6 Loadbreak. Izixhumi ezingahlukaniseka, ezinjengezixhumi ezingama-600A T noT-11 ezifile zingasetshenziswa nalezi bushing. Lezi bushings zenziwa yi-Epoxy Resin. Ngesiketi yenza ukuthi ikhefu le-Dead Rotatable Feed-thru Bushing lisetshenziswe kangcono. Okuqukethwe Kwikhithi: ● lntegral Deadbreak Bushing ● I ...
Isixhumi seTee Tap Isixhumi Esifile
I-Anhuang ekhethekile ku-Deadbreak Tee Tap Isixhumi, sinikezela ngekhwalithi ephezulu ye-Deadbreak Tee Tap Isixhumi. Ukwakheka: Isikulufu esixhuma: isikulufa esinamakhanda amabili sethusi, nesikesi ukuqinisekisa ukuhlangana okusondele. Isiginali se-Crimp: Ngokuya ngentambo yekhebula, khetha itheminali ye-crimp yethusi noma i-copper-aluminium crimp terminal. Isendlalelo sangaphandle se-semiconducting: i-EPDM yenjoloba ehamba phambili nekhebula lokuvikela ukufeza ukuvikela okuqhubekayo, nokuqinisekisa ukuthi uhhafu wangaphandle Ukuziphatha ...
I-600A Junction ethile yokufa okufile
I-Anhuang ekhethekile ku-busbar enesimo, sinikezela ngekhwalithi ephezulu yeJunction ejwayelekile. Okujwayelekile: 200A / 600A I-Junction ethile eqhekekile ihlinzeka ngamakhefu amabili, amathathu noma amane we-200A break kanye ne-600A break break, i-15kV interface exubile ohlangothini olulodwa ehlanganiswe ngaphakathi futhi ihlangabezana nazo zonke izidingo ze-ANSI / IEEE 386-Separable Insulated Connector Systems. Lapho ihlanganiswe nomkhiqizo olinganiswe ngokufanayo, i-junction ihlinzeka ngoxhumano oluvikelwe ngokuphelele, olufakwe ngokuphelele, olungahlukaniswa lokwephuka komthwalo noma olufile ...
15kV24kV 600A Deadbreak Busbar izindlela
Anhuang ezikhethekile Dead ikhebula izinhlangano, thina ukuphakela izinga okusezingeni Dead ikhebula. Okujwayelekile: 600A Izikhala ezihlukanisiwe ze-busbar kulayini wegatsha lekhebula zidlala indima yebhasi. Izici zayo zivaliwe ngokuphelele, zivalwe ngokuphelele. I-busbar engu-600A ingathayipha ikhebula yohlobo lwe-T, isixhumi sekhebula le-T-II, ithubhu engu-600A yokwengeza ne-cap engu-600A efakwe ukwakheka kwentambo yamagatsha amaningi. Ama-barbs e-DeadAma e-Deadbreak enziwe ngezinto zokwakha ezisezingeni eliphakeme. Okuqukethwe Kwikhithi: ● Umzimba webhasi lendawo ● I-Insta ...
I-15kV 600A Isikhumba Esivikelayo Esivikelwe
I-Anhuang ekhethekile ku-Insured Avikelayo Cap, sinikezela ngekhwalithi ephezulu yokuvikela i-Cap. Isingeniso esijwayelekile: I-15kV / 24kV 600A Insimu Yokuvikela Engavinjelwe iyinsiza esekelwayo eyenzelwe ukufaka umfelandawonye kagesi ngokuqinile futhi ngokuqinisa imishini yokuthwebula ibhulashi. Lapho ihlanganiswe nomkhiqizo we-load break kanye nocingo lokukhipha unamathiselwe emhlabathini, i-Insulated Protective Cap inikela ngesembozo esivikeleke ngokuphelele, esingaphansi sokuvikela imiphakathi enamandla. I-Insured Avikelayo Cap kungaba ukusetshenziswa ...
15kV24kV 600A Ikhefu elifile T Ukuxhuma Iplagi
I-Anhuang ekhethekile ku-Deadbreak Tee plug, sihlinzeka ngekhwalithi ephezulu ye-Deadbreak Tee pug Isixhumi. Okujwayelekile: Ama-plug Isixhumi se-DeadA 600A asetshenziselwe ukuxhuma ama-terminator amabili noma ngaphezulu ama-600A. Ama-plugs wesixhumi se-Dead break ajwayele ukusetshenziswa ku-splice ehlukanisekayo, noma nge-bushing extender, ukukhulisa ibanga ukusuka kupuleti langaphambili le-apparatus kuya ku-terminator engu-600A, ukunciphisa ukuqeqeshwa kwentambo. Izindololwane ze-Load break zibunjwa kusetshenziswa i-high quality sulfure-cured insulating and semi-conducting ...
600A Loadbreak Ukunciphisa Tap Ipulagi
I-Anhuang ekhethekile ku-Loadbreak Ukunciphisa i-Tap Plug, sinikezela ngekhwalithi ephezulu ye-Loadbreak Ukunciphisa i-Tap Plug. Okujwayelekile: I-600A / 200A Integral Dead break Bushing isetshenziselwa ukuguqula isikhombimsebenzisi esijwayelekile se-600A se-break break to a standard 200A load break interface. Isetshenziswe ngekephethi evikelayo engu-200A, i-MOV Elbow Arrester, i-Grounding Elbow noma i-Load break Elbow Isixhumi, i-dead dead break bushing inikeza isivikelo ngokuphelele. Kuzoba yi-T-Ⅱconnector uma ixhuma nge-T isixhumi. Okuqukethwe Kwikhithi: I-Loadbreak Re ...
Isixhumi se-DeadA esingu-600A T
I-Anhuang ekhethekile ku-Deadbreak Isixhumi, sinikezela ngesixhumi sekhwalithi ephezulu se-Dead break. Ukuqaliswa kwamazinga: ● Uhlelo lokuxhuma oluhlukanisiwe oluhlukanisayo lwezinhlelo zokusabalalisa ngaphezulu; I-ANSI / IEEE Std386-2006600V ● Amajakhethi avezwe ama-semiconductor ama-high-voltage cable splices nezixhumi ezihlukanisiwe ezifakwe ngaphakathi; ● Izintambo zikagesi ezikhutshiwe ezifakiwe nezinsiza zazo ezinamanani alinganisiwe ngaphezulu kwe-1 kV (Um = 1.2 kV) kuye ku-30 ​​kV (Um - 35 kV); ● Izindlela zokuhlola izesekeli zamandla ka ...